Ny fitiavana manoloana ny fankahalana
"(Hoy Jesosy:) Tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin’izay mankahala anareo; misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo." Lioka 6:27,28
"Aza mankahala ny rahalahinao amin’ny fonao." Levitikosy 19:17
“Ny fankahalana no fahavalon’ny fitiavana, fahavalo voalohany ary miharihary indrindra. Ny fankahalana dia manamafy ny fo. Hararaotiny ny fijaliantsika sy ny fahatezerantsika, mba hanilihana ilay ankahalaina, izay heverina ho tsy manana toetran’olombelona. Ny fankahalana dia manova ny saintsika ho ratsy. Aza manaiky mihitsy ho azon’ny fakam-panahy ka hanjary feno fangidiana” (Martin Luther King).
“Raha azo novakiana ny tantara miafina momba ny fahavalontsika, dia ho nahita fijaliana sy fahoriana be tao isika, ary ho ampy izany handrava ny fankahalantsika azy” (H. W. Longfellow).
Jesosy dia mitady amintsika mihoatra noho ny fialana amin’ny fankahalana. Asainy mitia ny fahavalontsika isika, mivavaka ho azy ireo, mamela ny helony. Saingy aiza no hahitana hery hanatanterahana izany? Amin’ny finoana Azy. Izay olona nateraka indray dia manana ny ain’Andriamanitra ary afaka maka tahaka Ilay ohatra ho azy, dia Jesosy. Tsy vitan’ny hoe nampianatra antsika ho tia ny fahavalontsika Izy, fa Izy mihitsy no nanome ho antsika ohatra lavorary, indrindra tamin’ny fotoana nanomboana Azy teo amin’ny hazofijaliana ka nivavahany ho an’ireo namono Azy.
Ny itaoman’i Jesosy antsika, dia tsy voatery ho fitiavana miaritra fotsiny izay atao amintsika, manaiky hampijaliana ary tsy miteny. Ny fifanandrinana amin’ny hafa, dia mety ho endrika fanehoana ny fitiavana tokony homena azy. Nandritra ny fitsarana an’i Jesosy, raha namely tehamaina Azy ny mpiambina iray, dia tsy ny herisetra no notoheriny, fa izay tokony hataon’ilay mpiambina no nasehony azy: “Raha niteny ratsy Aho, ambarao izay ratsy; fa raha tsara ihany kosa, nahoana no dia mamely Ahy ianao?” (Jaona 18:23). Naneho fitiavana ilay mpiambina Jesosy, raha nitaona azy hahatsapa ny tsy rariny tamin’ny fihetsiny. Asain’i Jesosy isika androany hanana fitiavana toy ny Azy.